ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ဆင်ဂွေးဥ ကျော်စံကွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ဆင်ဂွေးဥ ကျော်စံကွေး
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ဆင်ဂွေးဥ ကျော်စံကွေး
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 22, 2017 in Best Web Awards, History |3comments
တလုပ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီး ရွာထဲမယ် မြစ်ဆုံရေကာတာ လော်ဘီပို့စ်တွေတင် တလုပ်ကူမြူနစ်ပါတီနဲ့တလုတ်အစိုးရ ကောင်းကြောင်း၊ နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီအနောက်နိုင်ငံနဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန် ဆိုးကြောင်း ဝါဒဖြန့်တာ တွေ့တော့ ခံစားခဲ့ရတဲ့ တလုပ်ပြည်သူတွေအတွက် ယူကြုံးမရ ဖြစ်မိတယ်ဂျ။ တဆက်ထဲ သူတင်တဲ့ တလုပ်မတွေ မီနီစကပ်ဝတ် အလှပြတာ မြင်တော့ သွားရည်ကျမိတယ်။ မဟာဂေါင်းဆောင် အုတ်ကထ မော်စီတုံးကိုလည်း လေးစားမိတယ်။ တလုပ်ပြည် အတိတ်သမိုင်းကြောင်း တူးဆွမိတော့ ကူမြူနစ် ကြေးမုံဂျီး တခါမှ မဟဖူးတဲ့ အခြင်းအရာ ဘွားကနဲ တွေ့တယ်။ အားလုံးလဲ ကြားဖူးမှာပါ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး ဆိုတာ၊ ၁၉၆၆ ကနေ မော်စီတုံး ကွယ်လွန်ချိန် ၁၉၇၆ အထိ တလုပ်ပြည်တွင် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဆွေမျုိးပေါက်ဖေါ် မြန်တြံ့ပြည်မှာလဲ အားကျမခံ ဗကပများ ပါတီတွင်း သန့်စင်ရေး ဖြုတ်ထုတ်သတ် ပဲခူးရိုးမတောထဲ လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ စာသားအပြင် ဓါတ်ပုံပါ ကြည့်မှ သိမှာမို့ ဖဘမှာ ဖတ်တာထက် မူရင်းပို့စ်တင်ရာ မြန်မာဂေဇက် သွားဖတ်စေလိုပါတယ်။ ပြောနေကြာတယ် နည်းနည်း မြည်းစမ်းရအောင်….။ ။။။။
၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ကူမြူနစ်ခေါင်းဆောင် မော်စီတုံး နောင်တွင် ပြောစမှတ်ပြုရမည့် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို သူ့ သြဇာအာဏာ တရုတ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပြန်လည်သက်ရောက် အားကောင်းစေရန် စတင်သည်။ ထိုအချိန်က ကူမြူနစ်ခေါင်းဆောင်များဟာ ပါတီနဲ့ တိုင်းပြည်ကို လမ်းကြောင်းမှာပေါ် တွန်းပို့နေတယ် ထင်မြင်တာကြောင့် မော်ဟာ တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ညစ်ထေးနေတဲ့ အရာတွေကို သန့်စင်ဖယ်ရှားရန်၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်၂၀ကျော် ပြည်တွင်းစစ်ကို အောင်မြင်စေသော တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ် ပြန်လည်နိုးကြားရန် နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမတ နိုင်ငံ ထူထောင်ရန် လူငယ်များအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို မော် မသေခင် ၁၉၇၆ခုနှစ်အထိ အဆင့်ပေါင်းများစွာ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်မှုများကြောင့် တရုတ်ပြည် နိုင်ငံရေးနှင့် လူ့အသိုင်းအဝန်းထဲ နောင် ဆယ်စုနှစ်များစွာတိုင်အောင် ပဲ့တင်သံရိုက် တင်ကျန်နေမည် ဖြစ်သည်။ ။။။။
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး စတင်ချိန်
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် ဆိုဗီယက်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်သလို ဝါဒရေးရာပိုင်းထက် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု ဦးစားပေးသော ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးလမ်းစဉ် သိပ်ရောက်လွန်းနေကြောင်း တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင် မော်စီတုံးယူဆလာသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း မော်၏ အနေအထားမှာလဲ မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့သော ခုန်ပြန်ကျော်လွှား (၁၉၅၈-၆၀) မဟာစီမံကိန်း နှင့် နောက်ဆက်တွဲ စီးပွားရေး ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ရပ်များကြောင့် အားနည်းနေသည်။ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းအား ချေမှုန်းရန် နှင့် အာဏာ ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ဇနီးဖြစ်သူ Jiang Qing နဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လင်ပြောင် Lin Biao အပါအဝင် အစွန်းရောက် အုပ်စုတစုကို မော်စီတုံး စုစည်းခဲ့သည်။ ။။။။
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ပထမပိုင်းတွင် ပုဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှု တွန်းအားးပေးရန် မော်စီတုံး၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လင်ပြောင် ကြီးကြပ်ရွေ့ ယနေ့ခေတ် ကျော်ကြားလာမည့် မော့်စကား ကောက်နှုတ်ချက် စာအုပ်နီ သန်းပေါင်းများစွာကို တရုတ်ပြည်အနှံ့ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေ စေခဲ့သည်။
၁၉၆၆ သြဂုတ်လ ပါတီဗဟိုကော်မတီစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် မော်မှ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး စတင်သည်။ တနိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်ကျောင်းများပိတ်ပြီး ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း အကျင့်ပျက်ခြစား ဘူဇွာတန်ဖိုးများနှင့် တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ် ကင်းမဲ့နေမှုအား တန်ပြန်ဖို့ နုပျိုသစ်လွင် လူငယ် အင်အားစုများ အုံနှင့်ကျင်းနှင့် အစားထိုးရန် တောင်းဆိုသည်။ နောက်ပိုင်းလများမှာတော့ လှုပ်ရှားမှု အလျင်အမြန် ကြီးထွားလာပြီး ကျောင်းသူားများမှ ပြည်သူ့စစ် တပ်နီလူငယ် အုပ်စု ဖွဲ့စည်းကာ တရုတ် သက်ကြီးရွယ်အို နှင့် တတ်သိပညာရှင်များကို တိုက်ခိုက် နှောင့်ယှက် ရန်ပြုတော့သည်။ ပုဂိုလ်ရေး ကိုးကွယ်မှုဟာလဲ ဂျိုးဇက်စတာလင်တုံးကလို မော်စီတုံးအား ဝန်းရံ ပေါက်ဖွားလာပြီး သူ့အတွေးအခေါ်မှ တိုက်ရိုက်ဆင့်ပွား ပို့ခြမှုများ ဘက်ပေါင်းစုံတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ။။။။
ကူမြူနစ် အပြစ်ဒဏ် လူမဆန်
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးအတွင်း လင်ပြောင် အခန်းကဏ္ဍ
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး အစောပိုင်းကာလတွင် သမတ Liu Shaoqi နှင့် အခြား ကူမြူနစ်ခေါင်းဆောင်များ အာဏာမှ ဖယ်ရှားခံရသည်။ (သမတ Liu မှာ ရိုက်နှက်နှိ်ပ်စံ အကျဉ်းချခံရပြီး ထောင်တွင် ၁၉၆၉ တွင် သေဆုံးသည်။) ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွက် တပ်နီအစောင့်တပ်ဖွဲ့အတွင်း ဂိုဏ်းဂဏ အမျိုးစုံကွဲ ပြိုင်ဆိုင်ရာမှ တရုတ်မြို့ကြီးအမျာအပြား ၁၉၆၇ စက်တင်ဘာလတွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီး ခံရလုနီးပါး ရောက်သွားပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး လင်ပြောင်အား မော် မှ စစ်တပ်များ စေလွှတ် ထိန်းသိမ်းခိုင်းခဲ့ရသည်။ မြို့ပြ တပ်နီအစောင့်များအား တပ်နီလှုပ်ရှားမှု အားနည်းရာ ကျေးလက်များသို့ စစ်တပ်သုံး ပြောင်းရွှေ့စေသည်။ ဝရုန်းသုန်းကား ပဋိပက်ခများကြောင့် ၁၉၆၆ ခုနှစ် နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ၁၂%အောက် ကျဆင်းသည်အထိ တရုတ်စီးပွားရေး ထိုးဆင်းသွားသည်။
၁၉၆၆ တွင် လင်အား မော် အရိုက်အရာ ဆက်ခံသူအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ သူက မကြာခင် ဆိုဗီယက် တပ်များနှင့် နယ်စပ် အချင်းများမှု အကြောင်းပြုရွေ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး မာရှယ်လော အသက်သွင်းသည်။ အာဏာ စောစီးမြန်ဆန်စွာ ချုပ်ကိုင် ဟန်ပြင်တဲ့ လင်ကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်လာသော မော်ဟာ တရုတ်အစိုးရအဖွဲ့အား ခွဲဝေအုပ်ချုပ်နေသာ ထိပ်ပိုင်းလူ ဝန်ကြီးချုပ် ကျူအင်လိုင်း Zhou Enlai နှင့်ပေါင်းကာ စတင် ဆန့်ကျင်သည်။ ၁၉၇၁ စက်တင်ဘာ တွင် ဆိုဗီယက် ယူနီယံသို့ ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားရင်း လေယာဉ်ပျက်ကျကာ မွန်ဂိုလီးယားတွင် လင် သေဆုံးသည်။ (လေယာဉ်ပစ်ချခံရတယ်လို့ အတည်မပြုနိုင်တဲ့ သတင်းထွက်သည်၊ စဂါးချက်) တပ်တွင်းထိပ်ပ်ိုင်း သူ့လူများစွာ ဖယ်ရှားသုတ်သင်ခံရပြီး အစိုးရအဖွဲ့အား ဝန်ကြီးချုပ် ကျူအင်လိုင်း Zhou ပိုမိုချုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ လင်၏ ထိတ်လန့်စက်ဆုပ်ဖွယ် နိဂုံးချုပ်မှုကြောင့် မော်ရဲ့ စိတ်အားကျစရာ တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ်ဟာ သာမာန်ရိုးရိုး အာဏာလုခြင်းသို့ သက်ဆင်းလျက် တရုတ်ပြည်သူအများ စိတ်ပျက်သွားကြသည်။ ။။။။
ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး နိဂုံးပိုင်း
ကျူအင်လိုင်း Zhou တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်ရန် ပညာရေးစနစ် ပြန်လည် တည်ဆောက်ပြီး အစိုးရ အရာရှိဟောင်း မြောက်များစွာကို ရာထူး ပြန်ခန့်သည်။ ၁၉၇၂ တွင် မော်စီတုံး လေဖြတ်သွားပြီး တနှစ်ထဲမှာ ကျူအင်လိုင်း ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးစလုံး တိန်ရှောက်ဖိန် (ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ပထမအဆင့်တွင် အဖြုတ်ခံရသူ) ကို ထောက်ခံမှု ပုံအောထားပြီး လေးဦးဂိုဏ်းလို့ လူသိများတဲ့ သဘောထား ပိုတင်းမာသူ Jiang နဲ့ သူမ နောက်လိုက်များက ဆန့်ကျင်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရေးဟာ နောင်န်ှစ်ပေါင်းများစွာ နှစ်ဖက်အကြား တိုးလိုက်ဆုတ်လိုက် လိပ်ခဲတင်းလင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သဘောထား တင်းမာသူများဟာ ကျူ ကွယ်လွန်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာတွင် တိန်အား ဖယ်ရှားရန် မော်ကို နားချနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုနှစ် စက်တင်ဘာလ မော်သေဆုံးသည့်အခါ လူထု၊ ရဲ နှင့် စစ်တပ် တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ကာ လေးဦးဂိုဏ်းကို မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ တိန် ၁၉၇၇ တွင် အာဏာ ပြန်ရပြီး နောင် အနှစ်၂၀ကျော်ကြာအောင် တရုတ်အစိုးရကို စီမံကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်သည်။ ။။။။
လူပေါင်းတသန်းခွဲမျှ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးတွင် သေဆုံးပြီး သန်းပေါင်းများစွာ ထောင်ကျ၊ မြေယာ ဓန ဥုတ်စာ အသိမ်းခံရ၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်း (သို့) လူပုံအလယ် အရှက်ခွဲ ခံကြရသည်။ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး၏ ရေတို အကျိုးဆက်များကို တရုတ်မြို့ကြီးများတွင် အဓိက ခံစားရသော်လည်း ရေရှည် အကျိုးဆက်မှာ ရှေ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာ်အောင် တနိုင်ငံလုံးတွင် သက်ရောက်သည်။ မော်ပြုခဲ့သော ပါတီနှင့်စနစ်အပေါ် ထုနှင့်ထည်နှင့် တိုက်ခိုက်မှုဟာ အဆုံးတွင် မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ရလဒ် ထွက်ခဲ့ပြီး တရုတ်အများကို အစိုးရနှင့် အတူဆောင်ရွက်ရန် ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေခဲ့သည်။ ။။။။
မူရင်း။။ ။။။။ http://www.history.com/topics/cultural-revolution
In 1966, China’s Communist leader Mao Zedong launched what became known as the Cultural Revolution in order to reassert his authority over the Chinese government. Believing that current Communist leaders were taking the party, and China itself, in the wrong direction, Mao called on the nation’s youth to purge the “impure” elements of Chinese society and revive the revolutionary spirit that had led to victory in the civil war 20 decades earlier and the formation of the People’s Republic of China. The Cultural Revolution continued in various phases until Mao’s death in 1976, and its tormented and violent legacy would resonate in Chinese politics and society for decades to come.
In the 1960s, Chinese Communist Party leader Mao Zedong came to feel that the current party leadership in China, as in the Soviet Union, was moving too far inarevisionist direction, with an emphasis on expertise rather than on ideological purity. Mao’s own position in government had weakened after the failure of his “Great Leap Forward” (1958-60) and the economic crisis that followed. Mao gatheredagroup of radicals, including his wife Jiang Qing and defense minister Lin Biao, to help him attack current party leadership and reassert his authority.
Mao launched the so-called Cultural Revolution (known in full as the Great Proletarian Cultural Revolution) in August 1966, atameeting of the Plenum of the Central Committee. He shut down the nation’s schools, calling foramassive youth mobilization to take current party leaders to task for their embrace of bourgeois values and lack of revolutionary spirit. In the months that followed, the movement escalated quickly as the students formed paramilitary groups called the Red Guards and attacked and harassed members of China’s elderly and intellectual population. A personality cult quickly sprang up around Mao, similar to that which existed for Josef Stalin, with different factions of the movement claiming the true interpretation of Maoist thought.
Zhou acted to stabilize China by reviving educational system and restoring numerous former officials to power. In 1972, however, Mao sufferedastroke; in the same year, Zhou learned he had cancer. The two leaders threw their support to Deng Xiaoping (who had been purged during the first phase of the Cultural Revolution),adevelopment opposed by the more radical Jiang and her allies, who became known as the Gang of Four. In the next several years, Chinese politics teetered between the two sides. The radicals finally convinced Mao to purge Deng in April 1976,afew months after Zhou’s death, but after Mao died that September,acivil, police and military coalition pushed the Gang of Four out. Deng regained power in 1977, and would maintain control over Chinese government for the next 20 years.
ဒီပိုစ့်တွေကို ကြောင်လေသံ ပြင်သင့်တာ ပြင်ပြီး လူတွေ ဖတ်ဖို့ စာအုပ် စုထုတ်စေချင်ပြီ